China Polyester spandex elula uvemvane anezikhala jacquard Indwangu abakhiqizi kanye nabaphakeli |Huasheng
Indwangu ye-polyester spandex elula i-butterfly mesh jacquard
Ukwelula okuhle.Ukuthinta okuthambile.
I-Wicking Umswakama, I-Anti-Bacterial, Ukupholisa, Okugaywe Kabusha
Le ndwangu ye-polyester spandex elula ye-butterfly mesh, inombolo yethu yesihloko i-FTT-WB5927, yenziwe nge-92% i-polyester kanye ne-spandex engu-8%.
Indwangu ye-polyester spandex stretch butterfly mesh inokwakheka okuhle kwemeshi uvemvane.Kuyindwangu enezinhlangothi ezine enokuthinta okuthambile, okwenza kube indwangu eguquguqukayo kakhulu ongasebenza ngayo.
Le ndwangu ye-polyester spandex stretch butterfly mesh iyaphefumula futhi ilungele izingubo zezemidlalo, ukugqokwa okusebenzayo, phezulu, izingubo zangaphansi, nokugqoka kwe-yoga njll.
Ukuze uhlangabezane nezindinganiso eziqinile zekhwalithi zamakhasimende, lezi zindwangu ze-mesh zikhiqizwa imishini yethu yokuluka eyindilinga ethuthukisiwe.Umshini wokunitha osesimweni esihle uzoqinisekisa ukunitha okuhle, ukunwebeka okuhle, nokuthungwa okucacile.Abasebenzi bethu abanolwazi bazozinakekela kahle lezi zindwangu ze-mesh kusuka ku-greige eyodwa kuya kokuqeda eyodwa.Ukukhiqizwa kwazo zonke izindwangu ze-mesh kuzolandela izinqubo eziqinile ukuze kwanelise amakhasimende ethu ahlonishwayo.
I-Huasheng yamukela imicu yekhwalithi ephezulu ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kanye nekhwalithi yezindwangu zethu ezihlanganisiwe ze-jacquard zidlula izindinganiso zemboni yamazwe ngamazwe.
Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinga lokusebenzisa indwangu ehlanganisiwe ye-jacquard likhulu kuno-95%.
U-Huasheng wethula uchungechunge olusha lwendwangu ye-jacquard nyanga zonke.
I-Huasheng ihlose ukuqhubeka nokudala inani eliphezulu lamakhasimende.Asigcini nje ngokuhlinzeka ngezindwangu zethu ezihlanganisiwe ze-jacquard kumakhasimende ethu, kodwa futhi sinikeza isevisi enhle kakhulu nesixazululo.
Ngolwazi lweminyaka eyi-16 lwezindwangu eziluthiwe ze-jacquard, u-Huasheng usekhonze ngokusemthethweni amakhasimende amazwe angama-40 emhlabeni jikelele.
Okwedlule: UMélange wabhulasha indwangu yaseJersey
Olandelayo: Indwangu ye-polyester spandex ene-perforated fish eye mesh
I-Jacquard Knit Fabric
I-Jacquard Knitted Fabric
Indwangu ye-Jacquard Mesh
I-Jersey Jacquard Fabric
Yelula Indwangu yeJacquard
Indwangu elukiwe ye-jacquard encane yedayimane ecwebezelayo...
I-polyester ne-spandex ijacquard emnyama ephefumulayo...
I-polyester ne-spandex jacquard knit fabric ye ...
Ukuthengiswa okushisayo okungu-100% kwe-polyester knitted micro mesh nendwangu...
I-100% Polyester micro birdseye mesh interlock fa...
87.8% Polyester kanye 12.2% spandex jacquard mesh...